Sidee Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble Uwajahaysaa Doorashada ? | Gaaroodi News
Sidee Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble Uwajahaysaa Doorashada ?
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay jeediyay khudbad kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku wareejiyay arrimaha doorashada iyo amnigeeda ,wuxuuna ku sheegay hadal jeedintiisa oo koobneed in xukuumadiisu ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula imaan doonto qorshooyin la xiriira doorashada iyo amnigeeda. Wuxuu sheegay in ay ka go’antahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah.
“Waxaan rabaa in halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed dowlad goballeedyada,siyaasiinta iyo dhamaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go’antahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfuran iyada oo aan cidna xaqeeda la duudsiin”. Ra’iisul Rooble ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay in xukuumadiisa lagu wareejiyo arrimaha doorashada iyo amnigeeda isaga oo rajo ka muujiyay in howshaas ay xukuumaddu u wajihi doonto sida ay tahay .
Qalalaasihii ka dhacya Muqdisho
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa nasiib darro laga baaqsan karay ku tilmaamay rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho dhawaan kuwaas oo ka dhashay go’aankii Golaha Shacabku muddo kordhinta ugu sameeyeen hay’adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada amniga oo laga dhex dareemay kala qaybsanaan maalmihii ay rabshaduhu jireen ayaa ra’iisul Rooble wuxuu ugu baaqay in ay ku laabtaan xeryahoodii maadama xal laga gaaray waxyaabihii keenay qalalaasihii ay ku barakaceen tiro badan oo dad ah.
Mr Rooble ayaa intaa ku daray in ciidamada qaranku yihiin difaacayaasha dalka isla markaana aaney lahayn muxaafid iyo mucaarad isaga oo ku adkeeyay in aysan ku dhex milmin arrimaha siyaasadda,wuxuu sheegay in si loo xaliyo saameynta khilaafka siyaasadeed uu ku yeeshay arrimaha ciidamada qaranka uu magacaabayo guddi farsamo oo arrimahaa ka soo tala bixiya.
“Dhamaan ciidamada Qaranka ee geesiyada ah waa difaacayaashii qaranka mana laha mucaarad iyo muxaafid sidaas darteed waxaan farayaa in ay xeryahooda ku noqdaan kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa ugu baaqay in siyaasiinta ay ka fogaadaan hadallada iyo ficillada liddiga ku ah xasiloonida dalka maadama hadda la doonayo in la isaga yimaado arrimaha doorashooyinka si ay dalka uga dhacdo doorasho la isla oggalyahay.
Sidoo kale dowlad goballeedyada ayuu ku ammaanay doorkooda ku aaddan xaaladaha dalka isaga oo ka codsaday in ay xukuumadda federaalka ah kala shaqeeyaan sidii dalka doorasho uga dhicin laheyd. Wuxuu sheegay inuu si dhaqs ah ugu marti qaadayo madaxda mamaulgoballeedyada shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ee looga hadli doono dhameystirka heshiisyadii horey loo wada gaaray . “Waxaan dhaqso ugu casuumi doonaa in ay ka soo qayb galaan Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ee dhamaystirka arrimaha dorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-September iyo 13 kii Febraayo”
Ku wareejinta ra’iisul wasaare Rooble ee doorashada iyo amnigeeda
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad uu u jeediyay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa uu ku sheegay inuu ra’iisal Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono doorashada iyo amniga.
“Waxaan halkaan ka cadeynayaa in Ra’iisul wasaare Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta doorashada iyo amnigeeda sidoo kale fulinta qorshaha sida waafaqsan dastuurka waxaa iska leh ra’iisal wasaaraha.”ayuu yiri madaxweyne Farmajao.Madaxweynaha ayaa xukuumadda faray inay howshaas baaxadda leh u hoggaansamaan.
Golaha Shacabka oo ansixiyay in dib loogu laabto heshiiskii 17 Sep
Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa codsiga madaxweynaha kaddib u codeeyay in dib loogu laabto heshiiskii 17 Septembar waxayna ku waafaqeen madaxweynaha go’aanka uu qaatay .Dhamaan xubnihii fadhiyay ayaa u wada codeeyay mana jirin ka hor timid.Wadamada gobolka Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa soo dhoweeyay horumarka laga gaaray caqabad siyaasadeed oo taagneed keentayna kala qaybsanaan laga dhex dareemay ciidamada